တိုင်းရင်းသူ တစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့် လူမှု ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိပါတယ် အလှမယ် အိနုဝေ ⋆ Popular
တိုင်းရင်းသူ တစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့် လူမှု ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိပါတယ် အလှမယ် အိနုဝေ
December 11, 2017 Leanne Win
Miss Myanmar World 2017 ပြိုင်ပွဲမှ တစ်ဆင့် ပရိသတ် အားပေး မှု ရရှိလာတဲ့ အလှမယ် အိနုဝေကတော့ လက်ရှိမှာ သူမဝါသနာပါတဲ့ Modelling ပိုင်းကို သေသေချာချာ လုပ်ကိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တ လောမှာသူမက Show ပွဲတွေလျှောက်ဖြစ်နေပြီး MTV တစ်ခုရိုက်ကူးဖို့ လက်ခံထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ Modelling ပိုင်းကိုသေချာစွာ လုပ် ကိုင်နိုင်ဖို့ လေ့လာသင်ယူနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“ညီမခုလက်ရှိကတော့ Modellingပိုင်းကိုသေသေချာချာလုပ်သွား မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Modelling ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ အားလုံးကိုလေ့ လာသင်ယူနေပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တာတွေ၊ နေတာထိုင်တာတွေကအစ ညီမလေ့လာ သင်ယူနေပါတယ်။ မော်ဒယ်တစ်ယောက်က အဆီပို မရှိရင် ပိုလှ တယ်ပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့် အခုနောက်ပိုင်း အဆီပိုတွေ မရှိရအောင်လိွု့ပာ ကို အဓိကထားပြီး ဆော့ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ အသီးအရွက် တွေလည်း များများစားဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ် Miss ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်မယ်၊ မပြိုင်ဘူးဆိုတာတော့ သေသေချာချာပြောလို့ မရသေးပါဘူး။ ပြိုင်ဖြစ်ရင်လည်း ပြိုင်မှာပါ။ မော်ဒယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Miss ပဲဖြစ်ဖြစ် လှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ညီမအလှအပပိုင်းကိုတော့ သေချာထိန်းသိမ်းနေပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်အားပေးမူနဲ့ Model အလုပ်တွေလုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ သူမကို သရုပ်ဆောင် လုပ်ဖြစ်မှာလားလို့ မေးမြန်းခဲ့ရာ . . .
“သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကျတော့ စလုပ်တဲ့သူတွေအတွက် တအား ခက်ခဲ တယ်။ ကြိုးစားပြီးလုပ်မယ်၊ ကြိုးစားပြီးသရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ နောက် ပိုင်း အဆင်ပြေလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညီမကသရုပ် ဆောင်နဲ့ Model ဆိုရင် Model ပိုင်းကို ပိုဝါသနာပါတဲ့အတွက် Model ပိုင်းကို သေသေချာချာ လုပ်သွားမှာပါ။ ကြော်ငြာတွေလည်း ရိုက်မယ်ပေါ့။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကျတော့ အများကြီးလုပ်ဖို့ စီစဉ် ထားတာမရှိပါဘူး” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင် တိုင်းရင်းသူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူမက တိုင်းရင်းသူ တစ် ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှိပါတယ်” လို့ ပြောလာတဲ့ အလှမယ် အိနုဝေက . . .
“ညီမက အနုပညာလောကကို စဝင်လာတော့ အခက်အခဲရယ်လို့ ထွေထွေထူးထူးမရှိပါဘူး။ ညီမရဲ့ ဆရာက လည်း ဆရာဂျွန်လွင်ဖြစ်တဲ့ အတွက် မော်ဒယ်တစ်ယောက်က ဘယ်လို နေရမယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရ မယ်ဆို တာအကုန်သင်ကြားပေးတယ်။ စီနီ ယာအစ်မတွေကလည်း ညီမကို လက် တွဲခေါ်ကြတာရှိတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ညီမက တိုင်းရင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အတွက် တစ်ခါတလေ စကား မပြော တတ်တာ တွေရှိတယ်။ စကား မပြောတတ် ဘူးဆိုတာက လူမှု ဆက်ဆံရေးမှာ ပွင့်ပွင့်လင်း လင်းပြောတတ်တယ်။ တခြား တော့ အခက်အခဲသိပ်မရှိပါဘူး” လို့ လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၆၇ဝ၇၅ ဦးအား နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပေးအပ်
ပီတိထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေး ရပ်ဆိုင်းသွားရခြင်းနောက်ကွယ်မှ ၃၅ဝ ဗီဒီယိုဈေးကွက် ဂယက်
ပရိသတ်တွေကို သီချင်းတွေ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ သျှန်ထွန်း (မြန်မာစာ)
ခင်နဲ့ ကိုငြိမ်းမောင် ဇာတ်ရုပ်ထဲက ခင်ဇာတ်ရုပ်အတိုင်း သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ပရိသတ်များကို ဆုချီးမြှင့်မယ့်နီနီခင်ဇော်
ပြိုင်ပွဲတွေ ဝင်ပြိုင်ခြင်းကြောင့် ဘဝကို တိုးတက်စေတယ် အလှမယ် အိကျော့ခိုင်
ချစ်သူများနေ့ အိချောပို ဘယ်မှာရှိနေမလဲ